I-Kerasia - I-Airbnb
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Vasilis
U-Vasilis Ungumbungazi ovelele
Enye yezindlu ezine ezizimele, ezakhiwe ngamatshe, zendabuko, endaweni eluhlaza, esanda kulungiswa (2016) ehlelwe ngamaleveli amabili. Inokubukwa okungavinjelwe, izindawo zangaphandle ezikhululekile, izihambi zomndeni kanye nethuba lokuvakasha okuqondisiwe.
Ukuphikelela kwethu ekuhlanzekeni okucophelelayo, ukwakheka kwesakhiwo okungokwesiko, ingaphakathi elinethezekile, imishini ephelele yawo wonke amafulethi.
1 umbhede omkhulu, Imibhede elala umuntu oyedwa engu-2, 1 umbhede wosofa, imibhede yenetha engu-1
ubusuku obungu-7 e- Sivros
Njengoba sisemgwaqweni womphakathi wesifunda, sinomgwaqo omuhle ofinyelela endaweni yokulala, kodwa ngaphandle kwesiminyaminya. Indawo yokuhlala isendaweni ephakeme kakhulu yedolobhana endaweni enabantu abambalwa futhi lokhu kusinikeza umbono omlingo kuzo zonke izindawo zokuhlala futhi kuqinisekisa indawo ethule.
Enkabeni yedolobhana, eliqhele ngamamitha angama-500 ukusuka endaweni yethu yokuhlala, izivakashi zinethuba lokuvakashela imnyuziyamu kawoyela we-olive "Fabbrica Museum".
Lapho befika, izihambeli zethu zinikezwa ubhasikidi owamukelekile kanye nesidlo esinamaswidi nogologo esiwukhiqizayo. Phakathi wamukelekile, ulwazi ekhethekile mayelana yokuhlala futhi ulwazi olujwayelekile mayelana amabhishi, izinto endaweni, zokudlela, izenzakalo kwamasiko endaweni zinikezwa ngesiNgisi (uma ziye kuhlelwe muntu phakathi nokuvakasha kwazo lapha). Izivakashi zethu Ukuqwala izintaba, banikezwa imininingwane enemininingwane mayelana namathuba amaningi kanye nemizila yendawo yethu.
Lapho befika, izihambeli zethu zinikezwa ubhasikidi owamukelekile kanye nesidlo esinamaswidi nogologo esiwukhiqizayo. Phakathi wamukelekile, ulwazi ekhethekile mayelana yokuhlala f…
Inombolo yepholisi: 00001055448